Nguva Dzose Uve Kuvhara: 10 Statistics Kutyaira Kutengesa Shanduko | Martech Zone
Chikwata cheMicrosoft chaisa pamwechete chena chena bepa pane zvinetswa uye kubudirira kwemasangano ekutengesa, kugadzirwa kwavo, uye kugona kuchinjisa uye kutora tekinoroji. Isu tinowanzo sangana nemakambani ayo tout anoyevedza ekutengesa mhedzisiro kubva ku-izwi-remuromo uye kutonhora kufona. Handimbopokana kuti rimwe remazano aya anoshanda - hongu ivo vanoita.
Maitiro ekutengesa emakambani mazhinji haana kuchinja mukati memakore gumi. Izvo zvinosuruvarisa, nekuti izvo zviri kuchinja irwo rwendo rwevatengi uye kuti vatengi nemabhizinesi zvakafanana vari kutsvagisa sarudzo yavo inotevera yekutenga. Kunyangwe bhizinesi parinogamuchira kutumirwa kukuru kubva kune waunofambidzana naye kana mutengi, tarisiro iyoyo irikutsvagurudza kambani yako nechiremera chako online. Mubvunzo ndewokuti Kambani yako inomiririrwa sei kwavari kutsvaga?
Vatengesi vane simba havangoite zvavo mabasa ezuva nezuva zvakanaka… vanovimba nehunyanzvi hwekubatana munzira dzaisakwanisika makore mashoma apfuura. Harvard Business Review.
Microsoft's Whitepaper, Nguva Dzose Uve Kuvhara: Iwo maABCs ekutengesa muNguva Yemazuva Ano, chishandiso chakanakisa chekufamba nesangano rako kuburikidza neshanduko, pamwe nemazano kubva kunoshamisa zviwanikwa seshamwari yangu Jason Miller anobva kuLinkedIn uye gumi nembiri dzimwe nyanzvi dzekufambisa kutengesa kwako munzira yemhepo pane kurwa nayo.
Heano gumi akakosha manhamba kubva ku whitepaper inopa humbowo hunogombedzera, pane zviwanikwa, izvo zvaunoda kutora tekinoroji kana iwe uchitarisira kumhanyisa uye kuwedzera kushanda kwekutengesa kwako.
Maererano ne Pace Kubudirira, Vamiririri vekutengesa vanongoshandisa chete 22% yevhiki yavo vachitengesa. A Sirius Zvisarudzo kudzidza yakaratidza kuti 65% emakambani 'ekutengesa reps anoshandisa maawa akawandisa pazvinhu zvisiri-kutengesa, kusanganisira kuchera zviwanikwa uye kugadzira zvigadzirwa zvemharidzo.
Sekureva kweSBI, vatengi vari 57% yenzira kuburikidza neyekutenga kutenderera vasati vabata zvekutengesa. Zvekutenga zvakaoma, iyi nhamba inosvetukira ku70%.
Zvinoenderana ne IBM yekudzidza kudzidza, inotonhora kufona ingori 3% inoshanda.
Uchishandisa LinkedIn Inmail, vanogamuchira vanogona kupindura kune avo kusvika 67% yenguva
Maererano ne Corporate Zviratidzo, 74% yevatengi vanosarudza iyo kambani yaive YEKUTANGA kuwedzera kukosha
79% yevatengesi vanhu vanowana kota vanoshandisa nzira dzekutengesa munharaunda. 15% chete yeavo vasina kushandisa kutengesa munharaunda vakawana huwandu, maererano SBI.
Kutengesa munharaunda yaive # 1 nzira yekutengesa reps kuti vagadzire ivo vega mafambiro, sekureva SBI.
Maererano ne Microsoft, akakodzera data ruzivo pane tarisiro inogona kutema iyo nguva yakashandiswa pane pre-kufona kwekutsvagisa neanopfuura 70%.
The Miller Heiman Kutengesa Yakanakisa Maitiro Ekudzidza vakawana kuti 91% yemasangano epasi rese anoshanda mumadhipatimendi ese kuvhara madhiri makuru, nepo chete 53% yesangano rese rakabatana pamabasa makuru.
Makambani anoshandisa bhizinesi rezvemagariro evanhu akaona kugadzirwa kwebhizinesi kuchikwira neanosvika makumi matatu muzana, sekureva kwe McKinsey Global Institute.
Kurera mwana wekubereka ndiyo kiyi zvachose. Masangano makuru ekutengesa arikutsvaga maturusi nemasevhisi anogonesa vamiriri vavo vekutengesa kutengesa nekukurumidza uye kukuru kuita. Masangano ekutengesa ari kunetsekana ari kugadzirisa mhinduro dziri kunonoka kuita uye kugadzirwa kwezvikwata zvavo.
Makambani anofambira mberi ari kushandura mashandiro ebhizinesi kuchinjira kuchimiro chitsva chebasa chakatenderedzwa nemidziyo mbozhanhare, maturusi ekushandira pamwe uye matekinoroji eruzhinji… mabhizimusi ari kuchinja maitiro ekumbundira mutengi webhizimisi mutsva… Avanade.
Iva nekutarisa kuri kuuya infographic, whitepaper, uye kutengesa kudzidzisa akateedzana isu tichave tichipa mukushamwaridzana kutengesa. Iri iguru mukaha muindastiri yatakasarudza kuzadza. Isu takaburitsa pamwechete nyanzvi dzekumaka, zvemagariro midhiya uye zvemukati maeti, uye vatungamiriri vekutengesa kuti vape nzira yakasimbiswa yekushandisa kutengesa kwevanhu. Panguva ino, ita shuwa kurodha pasi whitepaper uye tarisa izvo zvinopa Microsoft Dynamics.
Nguva Dzose Uve Kuvhara: Iwo maABCs ekutengesa muNguva Yemazuva Ano
Tags: gara uchitengesaavanademaonero emakambaniIBMJason millerLinkedInlinkedin inmailmcKinsey wepasi roseMicrosoftmiller heimankumhanya kugadzirwakutengesa kuwedzerakutengesa mabhenjiKugonesa Kugonesakutengesa maitiro kudzidzakutengesa kwekutengesaSBIkutengwakutengesa kugoneswakutengesa njerekutengesa tekinorojisirius sarudzokutengesa munharaunda
9 Statistics pane Iyo Kukanganisa kweiyo Nhare YeMushandisi Ruzivo